Mee onwe gị ọduọ drone | Akụrụngwa n'efu
Mee onwe gị ọduọ drone
na drone ịgba ọsọ Ha na-ewu ewu ugbu a, n'ezie, enwere asọmpi asọmpi maka ụdị ngwaọrụ a. Nke ahụ agbaala ndị na-agba ọsọ amateur ume ka ha toba n'ọnụ ọgụgụ. Agbanyeghị, ịnweta ezigbo ọkwọ ụgbọ mmiri nwere ike ịdị oke ọnụ ma ọ bụrụ na anyị chọrọ Pro, mana site na Mee N'onwe Gị, anyị nwere ike iru ụgbọ mmiri na-agba ọsọ na ọnụahịa dị ọnụ ala.
Maka nke a enwere ọtụtụ ohere ugbua na weebụ, ụfọdụ nkuzi ndị na-akụziri anyị otu esi achịkọta onwe anyị, ndị ọzọ na-egosi anyị atụnyere drones kachasị mma maka ịgba ọsọ, wdg. Eziokwu bụ na ohere ndị ahụ sara mbara nke ukwuu, ị nwedịrị ike ịzụta ezigbo mmiri ma kwadebe ya n'onwe gị maka asọmpi ahụ, nke bụ ebe anyị ga-elekwasị anya n'isiokwu a iji mee ka ọ bụrụ eziokwu.
1 Ihe m chọrọ?
2 Nhọrọ iji mepụta ụgbọ ịnyịnya mmiri:
2.2 N'onwe Gị:
Ihe m chọrọ?
Ọ dị mma maka nwere ezigbo ọduọ drone Ikwesiri ilekwasị anya na mpaghara atọ:
Nwere ihe kacha mma sistemụ njikwa kwere omume. Inwe ike ijikwa drone nke ọma nwere ike ime ọdịiche dị n'etiti mmeri ma ọ bụ ịlafu agbụrụ.
Transmissionfọdụ usoro nnyefe enweghị a ogologo oge, ya mere, mgbe drone na-apụ, anyị nwere ike kpuo ìsì, ndị ọzọ enweghị nnukwu arụmọrụ ma nwee ike ịfefe ihe oyiyi na oge ewepụtara ma ọ bụ nwee igbu oge, nke ga-ejedebe na ndagharị na-adịghị mma. Ya mere, ana m akwado ịhọrọ usoro nchịkwa dị mma. Ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume FPV ugogbe anya ịhụ dị ka a ga - asị na ị nọ n'ime mmiri karịa iji njikwa maka smartphones ma ọ bụ njikwa ihuenyo ...
El oge nzaghachi nke usoro nchịkwa ga-adị ala dị ka o kwere mee, iji nwekwuo mmeghachi omume ozugbo anyị na-achịkwa ya. Igbu oge nwere ike ịkwụsị site na nchịkwa nke obere oge ...
La video ume ọnụego maka FPV ọ kwesịrị ịdị elu dị ka o kwere mee. Ọ bụrụ na etinyere okpokolo agba na ihuenyo ugboro ugboro, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ihe ọ bụla dị oke ọsọ, ị ga-enweta onyonyo oge ochie.
Na mgbakwunye na nke akporo, ọ na-atụ aro na Teknụzụ njikọ WiFi dị elu ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume na obere 5 Ghz zuru ezu karịa 2.4 Ghz. 2.4 Ghz nwere ike ịga n'ihu mgbe enwere ihe mgbochi n'ụzọ, ebe ọ bụ na ọkwa absorption nke ụdị a na-adịkarị ala karịa nke dị elu karịa, mana n'èzí ebe anaghị enwekarị ihe mgbochi na vidiyo ahụ ga-ebufe ozugbo, ka mma iji Kpụrụ IEEE 802.11ac nwere oke ọsọ na bandwidth (opekempe 802.11n). M ga-agbakwunye okwu nke antennas ejikọtara, otú ahụ ka mkpuchi ka mma ...
na injin Ha dịkwa oke mkpa, ebe ọ bụ na ọ bụrụ na anyị enweghị moto dị ike nke na-akpali ngwa ngwa ngwa ngwa, ọ ga-abaghị uru ịnweta usoro njikwa kacha mma, ndị ọzọ ga - emeri anyị site na ọsọ. N’agbanyeghi na moto enweghi ahihia bu ihe kwesiri ekwesighi izu igwe ozo nke n’adighi udi a.
N'ikpeazụ, ihe ọzọ dị oke egwu bụ ibu na aerodynamics. Ọ bụrụ na anyị nwere drone nwere nnukwu ibu ma ọ bụ aerodynamics na-adịghị mma nke na-ewepụta nnukwu ịdọrọ ma ọ bụ iguzogide ịga n'ihu, injin ndị dị ike agaghị enwe ike inye aka. Maka nke a, ikekwe ị ga-echegharị iji mee ka mmiri dị nro na nke kachasị wee nye nnukwu igwe foto, ihe ndị na-akwado mpụga (nke ka mma iji jikọta igwefoto n'ime ihe ngosi ahụ), ma jiri ihe ndị dị mfe dị ka o kwere mee, dị ka eriri carbon.
Ugbu a ka anyị lee olee otu anyi nwere ike isi mepụta drone...
Nhọrọ iji mepụta ụgbọ ịnyịnya mmiri:
M ekwuola na ị nwere ike ịga n'ihu n'ụzọ dị iche iche. Dika ikike gi ma obu ihe ichoro, ị nwere ike ime ya n'ọtụtụ ụzọ.
Otu n'ime ohere kachasị dị mma, mana ọ na-atọkwa ụtọ maka ndị na-eme ya zụta ụgbọ ịnyịnya gị. Mana n'ime nke a, anyị nwekwara ike ịkọwa ọdịiche dị n'etiti:
Buyzụta ụgbọ mmiri na-agba ọsọ. Nhọrọ a ga-adị irè maka ndị maarala otu esi efe efe efu ma nwee ahụ ike zuru oke. Anaghị m akwado ka onye mbido zụta ụgbọ mmiri na-agba ọsọ ma ọ bụ na ha ga-akụda ya na mgbanwe mbụ n'ihi oke ọsọ ha rụzuru. Ọzọkwa ọ na-ahapụ anyị ụzọ abụọ:
RTF (Njikere Iji ofufe): a drone ama kwadebere ife efe, ya bụ, zuru ezu ma na-arụ ọrụ ka i wee wepụ ya na igbe ahụ, dozie ya wee malite ife efe na-aga n'ihu.
Ihe kacha mma maka newbies:
Di X4 H107D
Nke kachasị mma maka ndị ọkachamara:
Ngwaọrụ Razer 250
Onye na -agba ọsọ Walkera 250
Walkera oke iwe 320
Ngwunye nke Vortex 250 Pro
ARF (Ọ fọrọ nke nta ka ọ dịrị njikere iji ofufe): ọ fọrọ nke nta njikere ofufe, ha chassis na-abịa na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ naanị ihe ọ bụla chọrọ mgbakọ ụfọdụ iji hazie nkọwa ụfọdụ iji kwado onye ọkwọ ụgbọelu. Nke a kachasị mma maka ahụmịhe ma ọ bụ aka ọrụ. Goodfọdụ ụdị dị mma nke ụdị a nwere ike ịbụ:
XCSource ngwakọta Kit
Zụrụ ụgbọ mmiri nkịtị wee kwadebe ya: anyị nwere ike ịzụta ezigbo mmiri, dị ka ndị sitere na Parrot, DJI, wdg, ma gbanwee ya n'onwe anyị iji mee ka ọ dị mfe ma ka mma maka ịgba ọsọ, ọ bụ ezie na nke a ga-adaba na ngalaba na-esonụ ...
Mee ya n'onwe gị ịzụta akụkụ dị iche iche ma ọ bụ gbanwee ụdị mmiri dị ugbu a na nkwalite iji kwadebe ya maka agbụrụ. Na nke a, ị nwere ike ime ihe ndị a:
Mee drone site na ncha ma ọ bụ site na enyemaka nke ngwa ARF:
Ọ bụrụ n’ị mee ya bido, ị nwere ike gụọ ndụmọdụ dị ka nke ndị nkuzi:
Mee ka ọ ghara ịgba ọsọ
Mee N'onwe Gị FPV Racing Drone
Gbanwee drone Transformgbanwe ya ka ọ bụrụ ụgbọ mmiri na-agba ọsọ bụ ihe ọzọ karịa ịmepụta ya site na ncha ma ọ bụ ihe fọrọ nke nta site na ọkọ. Ikekwe nke a bụ akụkụ kachasị oke egwu, n'ihi na anyị ga-ejide n'aka na ihe anyị na-eme ka anyị wee ghara ịtụgharị mmiri na-arụ ọrụ ka ọ bụrụ ihe efu. Fọdụ ndụmọdụ m ga - enye gị iburu n'uche isi ihe atọ m kwuru n'elu bụ (anyị ga - echeta):
Usoro njikwa: ọ bụrụ na anyị nwere ụgbọ elu dị oke ọnụ, anyị agaghị enwe nnukwu nsogbu n'akụkụ a karịa ịchọ enyo anya FPV. Mana ọ bụrụ na mmiri adịghị n'ebe ahụ na nke a, ikekwe anyị kwesịrị ịchọ ihe njikwa ma ọ bụ usoro ka mma iji dochie ya. Nsogbu n'echiche a bụ ndakọrịta nke sekit nke drone n'onwe ya ma ọ bụrụ na ọ bụghị modulu, ebe ọ bụ na ọ gaghị adaba na usoro ndị ọzọ. Ọ bụ ya mere o ji dị mkpa ịhọrọ ezigbo ntọala, ezigbo mmiri nke anyị ga-eji wuo ụgbọ ịnyịnya anyị.
Ndị na-arụ ọrụ: Ma eleghị anya, engines ndị drone nwere adịworịrị mma, ma eleghị anya, anyị kwesịrị ịgafe na ebe ọzọ iji nweta ọsọ na agility ọzọ, ma ọ bụrụ na ha abụghị engines dị ike, ana m akwado ka ị chee banyere ịzụta ọkụ mpi ahụ ha ga-enwerịrị ibu dị ala, ntụkwasị obi, arụmọrụ (nke a tụrụ na g / W, ya bụ, nha netiti ịdị arọ nke moto ahụ na ike ewepụtara), mgbagharị moto na RPM dị elu, yana sistemụ na-enweghị brush kama ndị akpachapụrụ anya . Iji, ihe kacha mma engines ga-abụ:
Icheoku AR Drone 2.0 Motor
Ibu ibu na ikukuIkwesiri iche banyere udiri ugbo ala dika ugbo ala nke motorsport, dika F1:
Mee ka mmiri ozuzo dị mfe iwepu ihe niile na-adịghị mkpa, dịka nkwado (igwefoto, nkwado, ..), ihe ịchọ mma, wdg. I nwekwara ike dochie plastik dị na mpụga na chassis dị n'ime ya na nke ejiri ihe ọkụ dị ka eriri carbon nke ị nwere ike ịchọta na ụlọ ahịa dị ka Amazon. Igwe ahụ, ọ bụrụ na ha dị arọ ma nyekwa obere ike, ikwesiri iwepụ ha ma tinye n'ọnọdụ ha ụfọdụ dịka ndị anyị kpọtụrụ aha na ndepụta gara aga.
Aerodynamics. M ga-ewepụ ihe mgbochi ọ bụla na-abụghị ihe ngosi dịka igwefoto na mpụga mpụga dịka ndị dị na DJI Phantoms, n'etiti ndị ọzọ, ma họrọ ịtinye obere igwefoto dị nfe dị n'etiti etiti carbon carbon lightweight. Ogwe aka ndị na-aga motọ quadcopters bụ nnukwu nsogbu ọzọ, ebe ọ bụ na ha na-adịkarị arọ ma nwee ọtụtụ nguzogide, ahụ nke drone dịkwa oke. Yabụ ị nwere ike iche maka ịhazigharị ihe ọhụụ ọhụụ ka ọ nwee obere profaịlụ na obere nguzogide iji nyere injinị aka ịsọ ọsọ. Gbakwunye ụdị na-adọrọ adọrọ ga-enyere, ma ọ bụ bụrụ nke sitere n'okike, site n'ụdị ọnụ ọnụ na nku nke nnụnụ ndị kachasị ọsọ. Cheta na okike mara ihe. Na F1 ụdị aghụghọ a na-ejikarị eme ihe ...
Dynamgbọala ike: Ihe m na-ekwughi banyere ya na nke dịkwa oke mkpa bụ na a na-ekesa igwe niile nke ọma na mmiri. Ekwesịrị itinye sekit na igwefoto na mpaghara dị ka etiti dị ka o kwere mee ma dị ala, n'ụzọ ahụ ị ga-esi wedata ike ndọda nke mmiri ahụ na nkesa ịdị arọ ga-aka mma. Ọ bụrụ na ị nwere akụkụ ụfọdụ na otu akụkụ na ndị ọzọ na nke ọzọ, ọdịiche dị na ibu nwere ike ime ka mmiri ahụ depụta ihe n'otu akụkụ karịa nke ọzọ, nke na-agbanwe njikwa.
Enwere m olileanya na m duziri gị nakwa na isiokwu a nwere ike na-enye aka n'ihi na nke a ntụrụndụ ...
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụrụngwa n'efu » drones » Mee onwe gị ọduọ drone
BC547 transistor: ihe niile ị chọrọ ịma
2N2222 transistor: ihe niile ị chọrọ ịma